Maalinta: Diseembar 26, 2016
Qalalaasaha bamka ee xarunta tareennada ee 3 ee Russia
Xarunta tareenka ee 3 ee ku taal Russia qaylo dhaanta bambaanooyinka: caasimada Ruushka ee Moscow ka dib imaatinka taleefanka wicitaanada bam, Kazan, Yaroslav iyo saldhigyada tareenka ee Leningrad waxaa laga daadgureeyay ku dhawaad ​​3 kun oo qof. KHUDBADII KA SII XARKA 3 [More ...]
Socdaalka dhimashada gadaashiisa ee ku yaalla magaalada Boosaaso
Safarka geerida ka dambaysa taraamka ee Bursa: Caruurta ku safra gadaal taraamka ee Bursa, iyagoo iska indhatiraya noloshooda, qalbiyada u keena afkooda. Muwaadiniinta, dhanka kale, waxay qaataan muuqaalka taleefanka gacanta oo ay ku muujiyaan jawaab celintooda warbaahinta bulshada. Magaalada Bursa [More ...]
Bandhigga Dalxiiska Magaalooyinka Erzurum ee Istanbul
Gawaarida Dalxiiska ee Magaalooyinka Erzurum ee Magaalada Istanbul: Gawaarida Dalxiiska ee Degmooyinka Magaalada Erzurum, degmada Üsküdar ee magaalada Istanbul waxay ku nool yihiin maalin buuxda Erzurum. Dalxiiska TIR wuxuu kuyaala Istanbul isagoo raacaya Konya, Antalya, Izmir, Kocaeli iyo Bursa [More ...]
Sawir qaadeyaasha Erciyeste: Tababbarka Sawirada Sawir-xirfadeedka iyo Socdaalka Aqoonta leh oo ay soo abaabusho Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri bil kasta waxaa lagu qabtay Erciyes bishan. Ku dhawaad ​​sawir qaade 150 ayaa ka qeyb qaatay safarka dalabka. Marka la eego baaxadda Dhaqanka Magaalada iyo Dhaqdhaqaaqyada Fanka [More ...]
Goobaha baabuurtu waxay tayada u keeneen Uludağ
Xadiiqadaha gawaarida gawaarida waxay u keeneen tayo Uludağ: Bursa Metropolitan Municipal 1. iyo 2. Gawaarida gawaarida ee 1400 ee wadarta gawaarida 3 ee la siiyay Gobolka Hotels waxay abuureen muuqaal ku habboon Uludağ iyagoo ka hortagaya xanaaq ka dhaca sannad kasta. [More ...]
Tareenku waa mustaqbalkeenna
Future Tareenka: waddooyinka tareennada, inkastoo ammaan iyo hababka bii'ada gaadiidka marka loo eego hababka kale ee gaadiidka weli waa habka ugu yaraan used gaadiidka dalka Turkiga. Dhoofinta Turkey ayaa marka la eego qiimaha securities in la sameeyo [More ...]
Bağbaşı Plateau oo wata Cable Car oo raba inay aragto Barafka: Tan iyo markii la aasaasay Denizli, Denizli waxaa si isdaba joog ah u ahaa dadka deggan Denizli iyo martida ka socota gobollada deriska ah oo wali waxay sii ahaanayaan xarunta dareenka. Waxaa laga asaasay Denizli [More ...]
Kadir Madaxweynaha, Zeytinburnu Metrobus Stop Journey
Kadir Duqa Magaalada Zeytinburnu Rugta Diyaaradaha ee Safarka: Metrobüslerin qaar baa istaaga waqtiyada shaqada si ay u gaaraan gawaarida inta badan suurtagal ma ahan. Bilowga joogitaanadan shaki kuma jiro in Zeytinburnu yimaado. Waqti gaaban iyo [More ...]
RayHaber 26.12.2016 Warbixinta Shirka
Dhisida Cusboonaysiinta ayaa la sameyn doonaa Meesha xiran ayaa la sameyn doonaa Adeegga Shaqaalaha ayaa la qaadi doonaa
taariikhi Karşıyaka Rugtu waa inay ahaataa madxaf
taariikhi Karşıyaka Matxafka idaacadda waa inuu ahaadaa:Karşıyakaxarun tareen taariikhi ah “Karşıyaka Madxafka. Arrintan Karşıyaka Dawlada hoose iyo ururo samafal oo kala duwan iyoKarşıyaka Mudaaharaadyada iyo socodsiinta ayaa la qabtay iyada oo lagu dardar gelinayo Sevdalları. Izmir [More ...]
Koox gaar ah oo loogu talagalay mashruuca tareenka fudud ee Trabzon
Koox gaar ah ayaa loo aasaasay mashruuca nidaamka tareenka nalka ee Trabzon: Dawladda Hoose ee Trabzon, Diyaarinta Qorshaha Gaadiidka Magaalooyinka iyo Mashruuca Sahaminta Falalka Degdegga ah ee Degdega ah iyo Daraasadda Daraasadda Khadka Tooska ah ee Tareenka iyo [More ...]
Haydar Akar, Adapazari-Haydarpasa Khadka Gaadiidka Gobollada ayaa ka adkaaday
Haydar Akar, Adapazarı- Haydarpaşa khadka tareenka gobolka waa la jabiyey: CHP Kocaeli kuxigeenka Haydar Akar wuxuu sii waday inuu wadahadalo la yeesho Sharciga Dhismaha Warshadaha ee TGNA inta uu ajandaha ka baxayo, Adapazarı-Haydarpaşa [More ...]
gaadiidka ugu qaalisan Bursalılar Turkey ayaa sii wadaan in ay ceeboobi
gaadiidka ugu Bursalılar Turkey ee qaali ah ay weli ku jirto arin argagax ah: CHP Bursa xigeenka Orhan sarıbal Duqa Bursa Metropolitan Recep jawaabta fiiqan yimid Altepe'ye! Sarıbal, "gaadiika ugu Turkey ee qaali [More ...]